Global Voices teny Malagasy » Lahatsary Ahitàna Mpianatra Misedra Ny Tsenan’asa Tsy Misy Indrafo Ao Japana, Mihodina Be Aty Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Marsa 2013 2:30 GMT 1	 · Mpanoratra Keiko Tanaka Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Tanora, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Mafy ny mahita asa ao anatin'ny toekarena henjana amin'izao fotoana izao. Saingy ho an'ireo mpianatra eny amin'ny kolejy Japoney, ny fomba fandraisana mpiasa faran'izay tena ifaninànana ao amin'ny firenena na “shu-katsu ” izay manomboka herintaona na mihoatra izany aza mialoha ny hahazoana diplaoma, dia mitondra ny zava-drehetra ho aminà dingana iray vaovao tanteraka.
Lasa mihodinkodina be aty anaty aterineto ny lahatsary fanentanana fohy  mampihetsi-po “Recruitment Rhapsody”, izay fitaratry ny dingana henjana sy feno sakana ho amin'ny fihazakazahana mitady asa izay tsy maintsy iaretan'ireo Japoney mpianatra, ary efa in-350.000 no nisy nijery.
Ilay lahatsary novokarin'ilay mpianatra zavakanto, Maho Yoshida  [ja], dia nakarina ho ao amin'ny YouTube tamin'ny 9 Martsa 2013 ary maneho tsara ny tsy fiasàna sain'ny mpianatra iray avy eny amin'ny anjerimanontolo izay tampotampoka teo dia niatrika ny ady amin'ny fitadiavana asa teo anivon'ireo andevon'orinasa  vonombonona, afaka mifaninana sy manao fanamiana mitovy.
afas afsa mpampiasa YouTube dia nanao jeritodika ny andro làsany fony nikaroka asa, ao anatin'ity fanehoankevitra ity [ja] :
Oay, Tsaroaka fa tahaka io koa aho fahiny. Halako ny ho isan'ireo marobe mpitady asa, saingy halako koa ny tsy mba mahazo tolotra asa. Niezaka aho ny tsy hanao hadisoana, mba tsy ho fihomehezana… nanao fotsiny izay nataon'ny olona sasany. Dia izany sisa no niafarako nohon'ny haratsiana tafahoatr'ilay fitadiavana asa voalohany. Manontany tena aho ny amin'ny isan'ireo tanora manana fahaizana tsy maintsy hopetahana marika hoe tsy alehany ary ho vaky fo, satria fotsiny hoe “tsy ampy traikefa teo amin'ny fikarohana asa” ry zareo.
Na tsy ratsy miohatra amin'ny ankamaroan'ireo tany mandroso aza ny tsy fananan'ny tanora asa any Japana , ny ankamaroan'ireo mpaneho hevitra no miahiahy hoe ny rafitra ara-tsosialy henjana, fa tsy ny toekarena, no mahatonga ny dingan'ny fandraisana mpiasa ho tena ifaninanana be sy sarotra :
Raha toa ka ny fanafoananao ny tena maha-ianao anao no hany lalan-tokana hahazoana ny fankatoavan'ny fiaraha-monina, dia ny rafitry ny fiarahamonina izany no lo voalohany indrindra, sa tsy izany ?
Raha toy io no rafitra ara-tsosialy misy ao Japana, inona no tsy maintsy hoeritreretin'izao tontolo izao rehefa mahita azy io ?
Mpianatra manatrika fotoana femelabelarana ataonà orinasa misahana fampidirana hiasa.
Sary an'i Dick Thomas Johnson (CC BY 2.0) nalaina tamin'ny 11 Desambra 2011
Tsapako ho tahaka ny misy faneriterena izany ao anatin'ny fiarahamonina Japoney amin'izao fotoana, toy ny hoe voahidy anaty efitrano fambolena (serre) izany aho. Amin'ny hoavy eto Japana, tsapako fa hisy fotoana iray hahafahanao maneho ny hevitrao amin'ny maha-olombelona anao. Misaotra anao tamin'ny nampakaranao ity lahatsary ity, tena nahaliana tokoa ilay izy.
Kanefa misy sasany amin'ireo mpaneho hevitra no tsy miombon-kevitra amin'ny hoe manitsaka mamotika ny maha-izy ny tsirairay ny rafitra fandraisana mpiasa :
Ndeha hosaintsainintsika ny dikan'ny atao hoe “asa”. Raha toa aho mandoa karama ho anao, tsy sanatria hoe te-haneritery anao aho. Ny olona izay afaka mamokatra ny tombony ho an'ny tenany manokana dia tsy mila miantehitra amin'ny orinasa iray. Tsy misy intsony ilay karazany hoe “Miasà, dia mahazoa vola arakaraky ny minitra niasàna”. Na dia tsy hisy toy izany hitranga intsony aza mandritra ny taona vitsivitsy, raha misy olona maro hiteraka tombony ho an'ny orinasa amin'ny hoavy, mbola hampiasa azy ireny ny orinasa. Mitovy ianao sy ny orinasa.
Izaho mihevitra hoe tena vita tsara tokoa ity lahatsary ity. Saingy misalasala aho ny amin'ny fahendren'ireo karazana fanehoan-kevitra manao hoe “tena hagaigena ny fikarohana asa!”. Tany an-tsekoly, nitovy daholo ny fanadinana, ary anjaranao ny manaraka ny fenitra. Tsy toy izany ihany ve ny tranga ho an'ny fiarahamonina?
Ny fomba fanao fototra mitovy amin'izany eny amin'ny fiarahamonina dia takiana amin'ireo mpianatra mitady izay ho asany voalohany ihany koa (Hafahafa ihany ny handeha hanatrika dinidinika miaraka aminà volo misarakorako, na volo nolokoina). Na izany aza anefa, azonao atao ihany ny mampivoatra ny maha-ianao anao manokana ivelan'ireo ankosotra [fandraisana mpiasa].
posaburo mpampiasa YouTube dia nandeha lavidavitra kokoa sady nanoso-kevitra hoe mila misaina tsara tsy manara-drenirano fotsiny ireo mpianatra:
Satria ireo mpianatra nampianarina fotsiny ny “valiny marina” fony tany an-tsekoly, sahiran-tsaina ireny mpianatra ireny rehefa injay miatrika ny tena tontolo, tsy misy valiny efa voafaritra. Rehefa mitady asa, heverin-dry zareo fa tsy maintsy manaraka ny “valiny marina” ny zavatra ataony, ary tsy mbola vitan-dry zareo mihitsy ny miala amin'ilay toe-tsaina tany an-tsekoly. Tsy afaka manao fandraharahana izany mihitsy ianao raha maka tahaka fotsiny ny efa nataon'ny olona, sa tsy izany?
Dikantenin'ireo fanehoankevitra, nataon'i Andrew Kowalczuk 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/29/47362/
 fanentanana fohy: http://youtu.be/M6rb6kknj3A
 tsy fananan'ny tanora asa any Japana: http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2012/03/30/glimmers-of-hope-in-hiring-for-japans-college-grads/